Iyadoo technology sare oo cusub oo maalmahan isagoo caan ah oo baahsan, dad badan ayaa ka helay hab si ay u isticmaalaan heer sare ah warbaahinta iyo madadaalada dhufto ee sida DVD-yada. DVD-yada waxa soo saarey software DVD gaare ah halkaas oo aad abuuri karaan, beddesho oo ku kaydinaysa video aad jeceshahay, waxa ay noqon ururinta filimada cajiib ah ama soo jeedinta slideshow ganacsi. Software DVD gaare waxaa loo isticmaalaa in la sameeyo video disk ah digital oo lagu ciyaari karo ciyaaryahan DVD ama DVD drive on your computer laptop iyo a. DVDs yihiin kale jaban sida qalab lagu kaydiyo daawashada filimaanta iyo videos qoyskaaga, saaxiibadaa iyo qaraabo. Iyada oo ku saleysan ka dib u eegista badan, halkan waa software ah DVD gaare 11 top ugu fiican si gaar ah ma.
Qeybta 1: sare Our ​​11 diiro Wixii DVD Software Samaynta
Qeybta 2: Xulashada More ee sahlan in la isticmaalo & Professional DVD Samaynta Software
Qeybta 1: sare Our Toban diiro Wixii DVD Creator freeware
Sida mid ka mid ah software ka DVD gaare ugu caansan suuqa, Roxio MyDVD ma adag yahay in la isticmaalo, laakiin aalad awood loo isticmaali karo DVD abuurka aad. Waxaad si toos ah u beddeli kartaa arrimo ay ka leedahay inay u beddesho videos iyo sawirada si ay u gaaraan saamaynta xaq u muuqaal ah, ka duwan midabka, iyo warejin saxda ah ee aad videos. Tan la xiriirta inay ka dhawaajiyaan tayo aad videos, waxay kaa caawin yarayn kartaa ama gebi ahaanba la baabi'iyo buuq ay fahamtay cad soo jeeda. Waxa kale oo uu leeyahay feature ah oo lagu magacaabo Mobile Photofit meesha aad qabsato karaa baaxadda photos xal sare oo soo bandhigay qalab mobile iyo waxa la wadaago ee baraha warbaahinta bulshada taas oo kaliya ayaa ku koobnayn looga baahan yahay size for uploading videos.
PRO 2. DVD-shaybaarka
PRO DVD-shaybaarka qoreysa tiro balaadhan oo ah DVD-u-habeynta. Waxa ugu fiican oo ku saabsan software waa in, waxa karaa bixiyaan version xor ah bilowga ah ee video qaadashada. Si kastaba ha ahaatee, xirfadlayaasha, PRO DVD-shaybaarka waa in la iibsaday ee xaddi gaar ah si ay u furid karo qaababka ka badan in ku dayn doonaa, oo wuxuu ku riday dhinacyo kala duwan oo ku saabsan video sida filimada shactarada ama saamiga durdurro audio. Professional video dejiya iyadoo la isticmaalayo software oo ka dhergin doonaa heerka ay gaari doonaan wax soo saarka-dhamaadka sare ah.
Baro wax badan oo ku saabsan PRO DVD-shaybaarka >>
Software waxa loo habeeyey in Eebe idin gubi filimada ee DVD la mawduuc kartoo aad DVD menu. Qarkii ugu weyn ee software tan DVD kii kale waa xaqiiqada ah in ay bixiso arrimo badan oo DVD menu la versions lacag la'aan ah. Waxaad edit karaa videos ay editor dhisay-in ka hor inta guba. Video kasta oo qaab audio noqon kartaa gubi galay DVD iyada oo tan ugu fiican software DVD qaadashada. Duubey sidoo kale abuuri karo by degida photos iyo gubi in DVD sidoo.
Baro wax badan oo ku saabsan iSkysoft DVD Creator >>
4. PowerDirector 13 tamashlaynta
PowerDirector 13 tamashlaynta sidoo kale waa mid ka mid ah software DVD qaadashada ugu wanaagsan ee la heli karo maanta. Tani waxay sidoo kale waa ku guuleystay dahab ah abaalmarinta ah software DVD qaadashada ugu fiican in si wax ku ool saamaynta balance u dhexeeya shaqeynta iyo geynta. In daqiiqo, waxaad samayn kartaa videos tayo sare leh qalab MagicMovie ay. Ka dib markii loo doorto sawiro iyo videos la arrimo ay aad rabto in aad isticmaasho, PowerDirector xamili karaan horumar kale.
Badan oo ku saabsan PowerDirector 13 tamashlaynta >> Baro
ArcSoftShowBiz DVD waa software qoraalka ah oo bixiya storyboard aragti fudud u eegno waqtiga iyo video soocidda ah xirfad dheeraad ah oo aad u xakameeyo saamaynta KMG ah, clips movie iyo kuwan raadkaygay audio fiican. Waxa kale oo uu leeyahay khabiir ku ah sawir slideshow iyadoo dhamaystiran goobaha DVD qoraalka ah ee sixiddiisa aad videos oo aad u-dhamaadka sare.
Baro wax badan oo ku saabsan ArcSoftShowBiz DVD >>
6. Awoodda soosaare
Power soosaare waxaa loo arkaa mid ka mid ah DVD kii ugu dabacsan oo samayn kara hawlaha badan ah software qoraalka caadiga ah. Utilities disc ay si toos ah ugu xiran in qalabka disc iyo taageero AVCHD. Habkaani wuxuu ku gaarka ah ee DVD gaare tan waxaa loo yaqaan Zone ee xubnaha ka ah halkaas oo dadka isticmaala gali kartaa oo kala soo bixi mawduucyada iyo arrimo badan oo ka yimid horumarinta xubnaha kala duwan oo keliya ee bilaash ah. Halkan, waxaad heli kartaa DVD menu xuddun u ah, slideshow sawir ama isku dar labadaba ah in u san yahay, waayo, DVD Abuur firfircoon iyo midabo.
Baro wax badan oo ku saabsan Power soosaare >>
Corel DVD MovieFactory Pro 7 waa software ah DVD qaadashada ugu fiican in uu leeyahay saamayn fasalka Holly-qoryo iyo bedeley tilmaam. Waxaa arrimo gaar ah ku samayn kartaa videos more rafcaanka iyo xarrago wax soo saarka DVD ah. Waxay leedahay qalab ugu horumarsan, halkaas oo aad si toos ah u disk u qoraan karaan, ka dhigi cajaladaha muusiga iyo dib ilaa files si aad u fudud u ciyaari karaa cajalladaha AVCHD iyo DVD-yada.
Baro wax badan oo ku saabsan Corel DVD MovieFactory Pro 7 >>
8. Muvee Shaaca X (for Windows XP, Vista, 7, 8)
Muvee Shaaca X waa mid kale software abuure DVD diinta photos iyo video footages galay mosaics xirfadeed si degdeg ah. Haddii aad u baahan tahay in ay ku dhameysan abuuraya aad video in muddo gaaban, Muvee Shaaca leh in X kaa caawin karaa, sababtoo ah waxaa isla goobtii ay hagaajin kartaa nooca aad video. 10 Hababka ay madal ka shaqeeyaa tiro balaadhan oo ah qaabab tayo sare leh. Videos Keenista ka fiidiyo, telefoonada iyo kamaradaha la sameeyo si fudud by this topnotch software DVD gaare.
Dheeraad ah ka baro Muvee Shaaca X >>
9. Sony DVD Injineerka Studio
Haddii aad rabto in aad meel u jeeda kuu gaar ah iyo badhamada graphic on your videos, Sony DVD Injineerka Studio waa doorasho weyn ee software DVD qaadashada ugu wanaagsan. Waxa ay u ogolaataa in aad music isku dhafan, thumbnails Isladooda, iyo bedeley, chaptering goobta iyo submenus. Your xiriiri u gaar ah oo ku saabsan mawduucyada ku samayn kartaa DVD videos u gaar ah oo ka duwan kuwa kale tan ugu wanaagsan software DVD qaadashada.
Baro wax badan oo ku saabsan Sony DVD Studio Injineerka >>
10. AHV DVD qoraalka
Waxaa jira dad doonaya wax ay tahay in la soo abaabulay oo taagan meel sax ah waa in ay. The AHV DVD qoraalka ayaa kaa caawin doona in gaaridda yoolkan aad files warbaahinta. Waxay leedahay presets cajiib ah in abaabuli karaan diiwaanka video aad galay mashruuc DVD hufan-raadinta. Tayada aad videos la soo saari karaa sidoo kale iyadoo la isticmaalayo horyaal music dhisay-in software iyo saamaynta.
Baro wax badan oo ku saabsan AHV DVD qoraalka >>
Womble EasyDVD aad ka bixin karto hab fudud si aad video la Casharrada ay lacag la'aan ah iyo ugu of dhan oo leh lix tallaabo shaqo-dabcan. In qasabno yar, waxaad samayn kartaa a DVD video-qeexidda sare in qof kasta oo doonaya in ay leeyihiin. Waxay ku xiran tahay in ay Womble ee technology version yaqaana oo waa fiican ee MPEG-2 videos ay leedahay taageero ah dulmar menu wanaagsan ugu horeysay users mar bilaabata iyo tan iyo DVD-dejiyeyaasha xirfadeed.
Baro wax badan oo ku saabsan Womble EasyDVD >>
Wondershare DVD Creator waa software DVD qaadashada si sahlan loo isticmaalo kaas oo kuu saamaxayaa inaad sameyso DVD kuu gaar ah gudahood tallaabooyinka. Iyadoo la dhisay-in arrimo badan oo aad DVD Menu, waxa aad awoodi kartaa in la abuuro DVD cajiib badan abid.
Taageerada gubanaya videos in ku dhawaad ​​kasta oo caan ah qaabab video.
Guba videos in DVD ah xirfad leh 40 arrimo menu + xirfad loogu talagalay.
DVD ayaa abuuray la wadaagi karto saaxiibada iyo qoyska.
OS taageerayaan: Windows 10/8/7 / XP / Vista / 2003 / Windows 10, Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10,10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6
Sida loo Guba ah Picasa DVD Muqaal u Daawashada TV-ga
MSWMM in DVD - Sida loo Play iyo Guba MSWMM in DVD
Sida loo Beddelaan muujinaysaa TiVo iyo Movies in DVD
> Resource > DVD > Top 11 Best DVD Making Software